ဆောင်းပါး - Chocolate Slim
ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်း၏အကူအညီဖြင့်တစ်ပါတ်တွင်ကိုယ်အလေးချိန်မြန်မြန်ဆန်ဆန်မည်သို့နည်း - လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းနှင့်ခွန်အားလေ့ကျင့်ခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းအတွက်အသုံးဝင်သောအကြံပြုချက်များ။
အဆိုပါ ketogenic အစားအသောက်။ သင်သည်အဘယ်သို့နိုင်မစားနိုင်အောင်မြင်ရန်တစ်ဦးအပြုသဘောရလဒ်။ ၏အင်္ဂါ keto အစားအသောက်။
မီနူးများအတွက်ရက်သတ္တပတ်။ ဘယ်လိုအန္တရာယ်အစာရှောင်ခြင်းကိုယ်အလေးချိန်အပေါ်အစားအစာ? ဘယ်လိုမပါဘဲကိုယ်အလေးချိန်ဖို့အလွန်အကျူး?
ပေမယ့်အရှုပ်ထွေးများ၏ပထမအဆင့်အ Dukan အစားအသောက်၊ဒါကြောင့်တော်တော်အန္တရာယ်ကင်းနည်းစနစ်ထိရောက်သောအလေးချိန်အရှုံး။